Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka “maalmo gudahood ayuu ku dhiman doonaa” | Berberanews.com
Home WARARKA Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka “maalmo gudahood ayuu ku dhiman doonaa”
Hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka “maalmo gudahood ayuu ku dhiman doonaa”
Dhaqaatiirta hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa sheegay in “maalmaha soo socda uu dhiman doono” haddii aan daryeel caafimaad loo fidin.
Dhaqaatiirta ayaa sheegay in baaritaankii dhiigga ee dhowaan laga qaaday uu muujinayo in laga yaabo in dhibaatooyinka wadnaha ah ay la soo dersaan amaba ay kilyuhu fadhiistaan.
Navalny ayaa cuntada ka sooman muddo 18 maalmood ah, isagoo ka dabanaya in laga daweeyo xanuun daran oo dhabarka ah iyo suuxdinta lugaha.
Ninkan oo aad u dhaliila Vladimir Putin, ayaa la xiray bishii February isgaoo loo heysto eedyemo hore oo musuqmaasuq.
Afar dhaqaatiir, oo uu ku jiro dhaqtarkiisa gaarka ah, Anastasia Vasilyeva, ayaa warqad u qoray saraakiisha xabsiga iyaga oo weydiianaya inay si degdeg ah ula kulmaan.
Warqadda, oo uu Dr Vasilyeva soo digay barta Twitter-ka, ayay khubarradu ku sheegeen in xaaladda Alexei Navalny ay aad halis u tahay.
Dhaqaatiirta ayaa ugu baaqay saraakiisha xabsiga inay u oggolaadaan inay degdeg u baaraan Navalny, “iyaga oo xisaabta ku darsanaya baaritaannadii dhiigga iyo sumeyntii dhowaan loo geystay”.
Alexei Navalny, oo 44 jir ah, ayaa geeri ku dhowaaday bishii August 2020 kaddib markii lagu sumeeyay sunta neerfaha waxyeeleysa ee Novichock. Wuxuu Madaxweyne Vladimir Putin ku eedeeyaa inuu amray sumeyntiisa, taas oo xukuumadda Kremlin ay beeniso.
Xaaska Navalny, Yulia ayaa sheegtay in miisaanka seygeeda uu haatan yahay 76kg (168 pounds), iyadoo 9kg ay ka dhacday tan iyo intii uu raashiinka ka soomay, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP.
Alexander Polupan, oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii daweysay markii Navalny after the poisoningla sumeeyay, ayaa soo wadaagay natiijada baaritaankiisa dhiigga, wuxuuna sheegay in natiijadu ay muujineyso inuu u baahan yahay daryeel caafimaad oo deg deg ah.
Sidoo kale ilaa 70 qoraa, farshaxaniisteyaal iyo aqoon yahanno caan ah ayaa ku biiray baaqa ah in wax laga qabto xaaladda Navalny, kuwaas oo saxiixay warqad ay Madaxweyne Putin ugu baaqayaan in la hubiyo in Navalny uu helo daryeel caafimaad oo ku filan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay weriyeyaasha u sheegay in daawyenta caafimaad ee Navalny “ay gebi ahaanba tahay mid caddaalad darro ah oo aan habbooneyn “. Bishii March, sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in dowadda Ruushka ay ka dambeyso sumeyntii loo geystay Navalny. Maamulka Biden ayaa cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil sare oo Ruush ah, haatanna Moscow ayaa sidaas si la mid ah sameyneysa.
Navalny ayaa sheegay inuu la il daran yahay xanuun dhanka dhabarka ah iyo lugta midig oo suuxsan. Horraantii bishan wuxuu la il darnaa qufac daran iyo qandho saa’id ah, waxaana la geeyay xarun xabsiga ku taalla oo dadka xanuunsa la geeyo kuna taalla magaalada Pokrov.
Maamulka xabsiga ee Ruushka ayaa sheegay inuu diiday in dhaqaatiirtooda ay daweeyaan.
Qareennada Navalny, oo xabsiga ku booqanayay ayaa sheegay inaysan wax dhaqaatiir ah joogin xabsiga.
Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegya in xabsiga lagu yaqaanno xaalado aan wanaagsaneyn, Amnesty International ayaana sheegtay in Navalny uu la kulmay xaalado u dhigma jirdil kuwaas oo laga yaabo inay si tartiib tartiib ah u dilaan.
Previous articleHoggaanka siyaasadeed ee la hallaabay himilladii shacabka Somaliland
Next articleGarroonka Aadan Cadde oo lagu qabtay Lacag